Is-maandhaafka Siyaasiyiinta Soomaalilaan Iyo Soomaaliya W/Q: Cali Cabdi Coomay
Friday June, 22 2018 - 04:19:18
Saturday August 26, 2017 - 09:36:51 in by Burco Office
Haddii aynu waxba ka baranweyno wixii hore inoo soo maray waa ayaandaro ta ugu weyn, Madaxweynihii hore ee Maraykanka ee John F. Kennedy ayaa laga hayey xigmadan” Those who don’t learn their past mistakes are likely to repeat it again” oo nuxur ahaan noqonaysa, kuwa aan waxba ka baran wixii soo maray khaladaadka ay galaan way ku celcelin goor kasta.
Bal eeg dhacdooyinkii ay isku maadhaafeen reer Soomaalilaan iyo kuwa Soomaaliya:
1989-kii ayuu Siyaasiga Axmed Siciid Samatar (Gacaliye) la odhan jiray ayaa Gudoomiyaha SNM oo Hotel Adisababa ku yaal ku jira la soo fadhiistay , halkina Coffee lagu wada cabay , si caadiya loo sheekaystay ileen waa rag
is yaqaan asxaab ahaaye , Gacaliye Mucaarad waa ku ahaa Siyaad Barre dawladiisii wakhtigaa , waxaanu ahaan jiray safiirka Somalia u fadhiyey dalka Faransiiska , la wada Bunee!
1990-kii Saleebaan Maxamuud Aadan oo SNM u qaabilsanaa Arimaha Dibada oo markaa magaalada Diridhaba ku sugan ayaa safaarada Talyaaniga la soo hadashay una sheegtay in waraaqo u yaalaan safaarada oo ay soo doontaan , Saleebaan wuxu la soo hadlay xafiiskii SNM ee Adisababa si ay waraaqaha uga doonaan wuxuna faray inay u soo qaadan (Waraaqaha waxay yihiin lama oga) inamaddi ba tagay oo soo qaaday waraaqihii , waraaqihi haddi la soo qaaday waxa warbaahinta lagu arkay in Ururka SNM ogolaaday in Siyaad Barre dawladisa kula shirto Qaahira dawlada Talyaaniga iyo dawlada Masar ay halkaa ku heshiisiin doonaan , warkii baa duulay oo dawladdii Itoobiya lafteeda ka xumaatay , Madaxda Ururka oo markaa Gudoomiye ka ahaa IHUN Cabdirahman Axmed Cali ay ka xumaadeen , Saleebaan ba loo yeedhay waa is baraxay inaanu wax warqada ku jira war ka hayn ilaa la yidhi soo doono , safaarada umay sheegin in waraaqahan ay ku jirto "invitation” kii shirkaa la rabay in la isu soo hor fadhiisiyo Cabdirahman Tuur iyo Afweyne.
Ibrahin IHUN , sidda uu iiga sheekeeyey mid ka mid ah inamaddi Airport ku soo dhaweeyey wuxu ka waraysay Hotel-ka ay dagan yihiin Madaxda Jabahadaha , inamaduna Hotel Geon markaa wufuuda Soomaalida inay dagan yihiin bay u sheegeen, wuxuu ku yidhi adeer soo wada eeg Hotelada kale inay degan yihiin in kale , waxa aan rabaa Hotel aanay nimankaasi joogin!!! …wuxuuna u raaciyey waan jeclaan lahaa inaan la kaftano oon la sheekaysto inagoo Guulaysanay oo Madax bannaan laakiin sidda ku aqaano imika BBC-da la hadlayaan oo been inaga sheegi.
Akhirkii Ibrahim wuxu ku degay Hotel aanay qoladaasi deganayn , shaqadii u tagay Adisababa sidii u doonayay ba u gutay , Warbaahintana ugu warramay ujeedada safarkiisa iyo sababta Soomaalilaan u joogto shirka.
Dhawaan waxa dhacay arrin dhalisay buuq siyaasadeed oo ka dhalatay kulanadii ay xisbiga WADDANI ku tageen Kiiniya gaar ahaan Nayroobi, oo baraha bulshada iyo warbaahinta lagaga faallooyinaayey inay la kulmeen siyaasiyiin reer Soomaaliya ah, oo weliba uu sheegay kulankooda ninkii musharaxa u ah doorashada Soomaaliya ee Farmaajo, ee haatan ah Madaxweynaha Soomaaliya. Siyaabo badan ba la isu wajalaa haddii aanad hubsan wax oo aanad foojignaan badan la iman , goob kasta iyo goor kastaba. Hadaba haddiiba ay jirto iyo haddiiba aanay jirin oo uu ka been sheegayo kulankaasi waxa habboon inay masuuliyiinta Waddani is-baraxaan soona bandhigaan inay arrintu wanjalaad tahay, oo ay bulshada Soomaalilaan tuhun saaraan. Manaha markii ugu horraysay ee ay siyaasiyiinta Soomaaliya wanjalaan kuwa Soomaalilaan, oo waa nooc siyaasadda ka mid ah in wixii fursad ah ee la kala helo aan la dayacin. Guddoomiye Cirro waa in la baro siyaabaha ay tahay siyaasadda wanjalaadda ku dhisani.